शरीरमा पानी कम हुँदा देखापर्ने ११ लक्षणहरू | Cyprus-Nepal.com
काठमाडौं – भनिन्छ, पानी जीवनको आधार हो । धर्मशास्त्रदेखि विज्ञान सम्मले जीवनको उत्पत्ति पानीबाट नै सुरु भएको भन्ने तर्क पेश गरेका छन् । अझ हाम्रो शरीरको रासायनिक विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यसको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा पानीले नै ओगटेको छ ।
यसरी जीवनको महत्वपूर्ण घटकको रुपमा रहेको यस यौगिकको शारीरमा क्षय पनि निरन्तर रुपमा भइरहने हुँदा यसको पूर्ति गर्नका लागि हामीले निरन्तर रुपमा (जलपान) पानी पिई रहनुपर्ने हुन्छ ।
नियमित अन्तरालमा जलपान नगर्दा थाहै नपाइकन जल–अल्पताको शिकार भई अनेकौ स्वास्थ्य समस्याहरु देखा पर्न सक्छन् र आफ्नै लापरबाहीको कारण गम्भीर बिरामीको चङ्गूलमा फसि व्याक्ति रोगी बन्न सक्दछ ।
सबै (वयस्क व्यक्तिले) दैनिक ४/५ लिटर पानी पिउन आवश्यक छ तर भागदौडले भरिएको यस जिन्दगीमा व्यस्तता एवम् विस्मृतिका कारण पर्याप्त पानी नपिइरहेका हुन सक्छौं तर हामीले पर्याप्त पानी पिइरहेका छौं छैनौं भनेर पर्याप्त पानी नपिउँदा उत्पन्न हुने केही शारीरिक एवम् मानसिक चिन्ह एवम् लक्षणहरुको जानकारी हुन आवश्यक छ ।
यी चिन्ह एवम् लक्षणहरुको ज्ञात हुन सके आफुले पानी पर्याप्त पिएको, नपिएको बेलैमाजाँच गरी तत्काल पानी पिउन सकिन्छ । पानी पर्याप्त नपिउँदा देखा पर्ने चिन्ह एवम् लक्षणहरु निम्न लिखित छन् ।
शरीरमा पानी कम भएको मूख्य लक्षण भनेको मुख सुक्नु हो । शरीरमा पानीको मात्रा कम भएपछि र्‍याल ग्रन्थिले पर्याप्त र्‍याल बनाउन सक्दैन र फलतः मुख एवम् घाँटी सुक्दछ । बारबार मुख एवम् घाँटी सुक्न थाल्यो भने यो समस्या निर्जलीकरणले गर्दा हो भन्ने बुझेर तुरुन्त पानी पिउनु पर्दछ तर पानीको पूर्ति नुन चिनी हालिएको एवम् कार्बोनेटेड पेयले गर्न सक्दैन । यस्ता पेय पिउँदा झन् जल–अल्पता बढ्दछ । यसर्थ तिर्खा लागेको बेलामा पानी पिएर नै तिर्खा मेट्नुपर्दछ ।
छाला सुख्खा हुनेः
जोनी दुई हड्डीहरुको संगमलाई भनिन्छ । जोर्नीमा दुई हड्डीहरुलाई आपसमा बाँधेर राख्ने लिगामेन्टहरु हुन्छन् भने सन्धि स्थानमा कार्टिलज नामक कोमल तन्तुहरु पनि हुन्छन् । लिगामेण्ट एवम् कार्टिलेज जस्ता कोमल तन्तुहरुमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशत पानी रहेको हुन्छ भने यी तन्तुहरुलाई निर्वाध कार्यरत रहनका लागि पर्याप्त पानी आर्”ता भइरहनु पर्दछ ।
शरीरमा पानीको अभाव भइरहेको खण्डमा यी तन्तुहरुमा हुने पानी कम भई तन्तुहरु विगठित हुन सक्छन् । फलतः जोर्नी दुख्ने, सुन्निने, लिगामेण्ट एवम् कार्टिलेजहरु खिइने र जोर्नी नै विकृत हुने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् । यद्यपि जोर्नीको स्वास्थ्यलाई खराब गर्ने धेरै तत्वहरु छन् र त्यसमध्ये आम एवम् वास्ता नगरिएको कारण कम पानीको सेवन पनि हो ।
पहेलो पिसाब आउनुः
पिसाब स्वास्थ्यको दर्पण हो । पिसाबको रंगले स्वास्थ्यको धेरै आयामहरुको जानकारी दिन सक्छ र यसमध्ये पिसाबको रंगले शरीरमा पानी कम भए, नभएको विषयको पनि जानकारी दिने गर्दछ । यदि पिसाबको रंग पहेँलो हुँदै गयो भने मान्नुहोस् कि तपाईंको शरीरमा जलअल्पता सुरु भइसक्यो र तपाईंको शरीरले पिसाबबाट हुने जल विसर्जनलाई रोक्न थालिसक्यो । यसर्थ, हाम्रो शरीरमा हुने जल अल्पताको पहिलो चिन्हको रुपमा पहेलो पिसाबलाई लिन सकिन्छ । साधारणतया मान्छेको पिसाब हल्का पहेलो रंगको हुन्छ तर पिसाब गाढा पहेलो हुँदै गयो भने मान्नुस् कि यो जल अल्पताको लक्षण हो ।
पिसाबको मात्रा कम हुनुः
नियमित रुपमा पानी पिइरहने व्यक्तिले नियमित रुपमा पिसाब फेरि पनि रहने गर्दछ तर शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदै गयो भने पिसाबको मात्रा र नियमितिता पनि कम हुने गर्दछ । साधारणतया एउटा स्वस्थ व्यक्तिले ६ देखि ७ चोटि सम्म पिसाब फेर्ने गर्दछ तर दैनिक ६, ७ चोटि भन्दा कम पिसाब फेरिएमा यो जल अल्पताको प्रारम्भिक चिन्ह हुन सक्छ ।
मल विसर्जनको नियमितता अत्यन्त कम भई दैनिक एकपल्ट सम्म पनि हुन नसक्नु वा दिसाको मुलायमपन नष्ट भई साह्रो दिसा आउनुलाई कब्जियत भनिन्छ । उसै त कब्जियत अनेकौं कारणले हुने गर्दछ तर शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको खण्डमा पनि कब्जियतका लक्षणहरु देखा पर्ने गर्दछ । यसकारण पानी कम भएर कब्जियत भएको भए पानी पिएरै कब्जियत ठिक गर्न सकिन्छ र अन्य कारणबाट कब्जियत भएको भएपनि प्रशस्त पानी पिउँदा कब्जियत निवारणमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँदछ ।
शारीरक एवम् मानसिक थकाइः
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुदै गयो भने शरीरिक एवम् मानसिक थकानको महसुस हुने गर्दछ । तर सामान्यतया हामी शारीरिक एवम् मानसिक थकान भएको खण्डमा चिया कफी वा कार्बोनेटेड ड्रिङ्क पिउने गर्दछौं । यसो गर्दा एकछिन पुनः ताजगीको अनुभव त हुन्छ तर शरीरमा भएको जलअल्पता पुनः बढ्दछ र केही क्षणपश्चात् झन् धेरै थकाइ लाग्न थाल्दछ । यसकारण जब हामीलाई शारीरिक एवम् मासिक थकाइको अनुभव हुन्छ । त्यस अवस्थामा पानी पिउने गरौं ।
बेला बेलामा टाउको चडक्क चड्कने वा दुख्ने समस्या शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनाले भएको पनि हुन सक्दछ । सामान्यतया नियमित रुपमा टाउको दुखिरहने समस्या भएमा नियमित विनाकारण पानी पिएर यस समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा जडीबुटीको चिया, मोही, मह, कागती, पानी, प्राकृतिक तत्वहरुद्वारा निर्मित सर्बत वा फलको रस पिउँदा झनै उत्तम हुन्छ । तर टाउको दुखाइको निहुँमा चिया कफी या कार्बोनेटेड डिङ्क वा चिनी हालिएका ड्रिङ्कस पिउँदा जलअल्पता झनै बढ्न गई समस्या पुनः थपिन सक्छ ।
पाचन सम्बन्धी समस्याः
नियमित रुपमा पाचन समस्याबाट ग्रस्त भइरहनु भएको छ र पानी पनि पर्याप्त मात्रामा पिउनु हुुन्न भने तपाईंको पाचन समस्या जल अल्पताको कारणले हुन सक्दछ । पाचन सुचारु हुन चाहिने पर्याप्त पानी नपिउँदा विशेषगरी अम्लपित्त, अपच, अजीर्णता, पेट फुल्ने दुख्ने ढ्याउढ्याउ आउने जस्ता समस्या देखिन सक्दछ । यसको अलावा ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, अपान वायुको वृद्घि र ढ्याउढ्याउ आउने जस्ता समस्याहरु पनि जल अल्पताकै कारणले हुने गर्दछ ।
१० प्रतिशत कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीः हाम्रो शरीरमा रोग एवम् किटाणुहरुसँग लड्नको लागि प्रतिरक्षा प्रणालीको व्यवस्था छ । प्रतिरक्षा प्रणाली सशक्त भएको खण्डमा शरीरले धेरै रोग विरुद्ध ससक्त ढङ्गले लडेर शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ तर शरीरमा पानीको मात्रा कम भएको खण्डमा शरीरबाट निष्कासित भएर जानुपर्ने विजातीय द्रव्यहरु विसर्जन हुन नसक्दा शरीरमा विष सञ्चय हुन पुग्दछ । फलतः यी विजातीय द्रव्यहरुको संकलनले प्रतिरक्षा प्रणालीको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ ।
शरीरमा पानी कम भएको खण्डमा व्याक्तिको कान्ती एवं तेज पनि कम हुने गर्दछ । यदि कसैलाई शरीरमा कम उर्जाको महसुस हुन थाल्यो भने यसको कारण जल अल्पता पनि हुन सक्दछ ।
(लेखक भरतपुर–१ वागीश्वरी स्थित योगी नरहरिनाथ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयका मेडिकल डाईरेक्टर हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस् : गर्मीमा पानी पिउनाले कयौ फाइदा, कति पिउने पानी ? के के छ फाइदा ?
फ्रिजको पानी कति हानीकारक ?
One thought on “शरीरमा पानी कम हुँदा देखापर्ने ११ लक्षणहरू”
Pingback: सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरण : एक सयभन्दा बढीसँग सोधपुछ | Cyprus-Nepal.com